Lumina နှင့် Draco: ရိုးရှင်းသော၊ အလင်းရောင်ရှိသောအခြား Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ၂ Linux မှ
GNU / Linux များ
Login / မှတ်ပုံတင်ပါ
Lumina နှင့် Draco: ၂ ရိုးရှင်းပြီးအလင်းရောင်ရှိသည့်အခြားရွေးချယ်စရာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ
Linux နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Linux သုံးစွဲသူများအကြားတွင်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသော element များစွာရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဒြပ်စင်များသောအားဖြင့်နှစ် ဦး စလုံးပါဝင်သည် Desktop Environments (DE) ကဲ့သို့ Window မန်နေဂျာများ (WM)။ ထို့ကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုမှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဒီဟာကဒီ ၂ ခုရဲ့အလှည့်ပါ။ Lumina နှင့် Draco.
ထိုအရာများကိုသူတို့အပြည့်အ ၀ မဝင်ခင်သတိပြုသင့်သည် Lumina နှင့် Draco သား ၂ ရိုးရှင်းသော၊ ပေါ့ပါးသော Desktop Environments (DE)ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လုံးဝတည်ဆောက်ထားသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာပထမပုံစံဖြစ်သည်။
Trinity and Moksha: ၂ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
ထို့အပြင်ချစ်သူများအတွက်မှတ်ထားသင့်သည် Desktop Environments (DE)ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင် DE ဖော်ပြခဲ့တဲ့သောခဲ့ကြသည်: သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူနှင့် Moksha။ ဘယ်အဖြစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်
"အချို့သောသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသော GNU / Linux Distros များ၌ဆက်လက်လည်ပတ်ရန်ခေတ်မီအောင်လုပ်ထားသော Desktop Environments ဟောင်း၏ရလာဒ်များ (အထူးသဖြင့်၎င်းတို့ရည်ညွှန်းထားသောအလားအလာကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ရန်အတွက်ရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း (RAM, CPU))".
အကြောင်းပြချက်, ဒီ post ပြီးသွားပြီးနောက်, ငါတို့သည်သင်တို့အောက်ပါဖတ်ရန်အကြံပြုသည် ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ:
DEBIAN 10 မှပံ့ပိုးမှုမရှိသောအခြား Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သောအခြားသူများ: GNOME, KDE Plasma, Xfce, သစ်ကြမ်းပိုး, အိမ်ထောင်ဖက်, LXDE y LXQT.
1 Lumina နှင့် Draco: Desktop Environments (DE)
1.1 Lumina DE ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Lumina DE ထူးခြားချက်များ
1.3 Draco DE ဆိုတာဘာလဲ။
1.4 Draco DE ထူးခြားချက်များ
Lumina နှင့် Draco: Desktop Environments (DE)
Lumina DE ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ Lumina DE တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်:
"ပေါ့ပါးသော Desktop Environment ကိုမြေကြီးမှခြေရာအနည်းငယ်သာရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးသင့် system အားအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာတာဝန်များအကြားချောမွေ့စွာစီးဆင်းရန်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ utility မျိုးစုံကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ထားသည့်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုသို့တည်ဆောက်သည်။".
Lumina DE ထူးခြားချက်များ
၎င်း၏ developer များက၎င်းသည်ထူးခြားစွာရပ်တည်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားသည်ဟုဆိုကြသည် Desktop Environments (DE) por:
လက်ရှိ Distro နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပါ Trident y TrueOS ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် BSD Community Distros အတွက်အထူးကောင်းမွန်သည် (သို့သော်) (ဆက်မလုပ်တော့ပါ) ။ သို့သော် Lumina DE ကို Linux Distribution အပါအဝင်မည်သည့် Operating System သို့မဆိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသော desktop အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာမူဘောင်များ (DBUS, policykit, consolekit, systemd, HALD, အခြားသူများအတွက်) အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
မည်သည့် "နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူ" အပလီကေးရှင်း (ဝဘ်ဘရောက်ဇာများ၊ အီးမေးလ်ဖောက်သည်များ၊ မာလ်တီမီဒီယာဆော့ဖ်ဝဲများ၊ ရုံးသုံးအစုံစသည်) နှင့်အတူမပါဝင်ပါ။ Lumina မှပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသည့်တစ်ခုတည်းသောအသုံးအဆောင်များမှာစီမံကိန်းအတွက်အထူးရေးသားထားသည့်အသုံးအဆောင်များဖြစ်ပြီးနောက်ခံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကြီးဆုံးသော့ချက်သည်ဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက် system-default defaults ကိုတည်ဆောက်ရန်ရိုးရှင်းသောစာသားအခြေပြုဖွဲ့စည်းမှုဖိုင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် desktop vendors များသည် user / user အတွက်သာအလုပ်လုပ်ရန် interface / system defaults ကိုအလွယ်တကူကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
plugins များအပေါ် အခြေခံ၍ interface ဒီဇိုင်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် Desktop / Panel တွင်မည်သည့် plugins များကိုအသုံးပြုမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် desktop ကိုသူတို့လိုချင်သောအတိုင်းအတာကိုပေါ့ပါး / လေးလံစေနိုင်သည်။
ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် system interface တစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အရွယ်အစားမဆိုအလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ link ကို 1, link ကို2y link ကို 3.
Draco DE ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ Draco DE တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်:
"ရိုးရှင်းသော၊ ပေါ့ပါးသော desktop environment တစ်ခု။ သေးငယ်သော်လည်း၎င်းသည် XDG ပေါင်းစည်းခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သော desktop ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ desktop၊ dashboards၊ Draco တွင်အသုံးပြုသူဆိုင်ရာမည်သည့် application မှမပါဝင်ပါ။ Draco ကို Slackware Linux အတွက်နှင့်တီထွင်ထားသော်လည်း RHEL / CentOS / Fedora နှင့်အခြား Linux များနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။ Draco Lumina ၏လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်ပါတယ်".
Draco DE ထူးခြားချက်များ
မတူဘဲ Lumina DE၏ဝက်ဘ်ဆိုက် Draco DE ၎င်း၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပူဇော်ပေမယ့်သတိရမထားဘူး Draco DE တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Lumina DE ၏ချိတ်ထို့ကြောင့်ခြားနားချက်များစွာရှိသင့်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့အောက်ပါ extract နှင့်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်
သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း- စနစ်အတွင်းရှိရရှိနိုင်သည့်သိုလှောင်မှုနှင့် optical ကိရိယာများကိုပြသခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှု / optical ကိရိယာများကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်သည့်အခါအလိုအလျောက်စီဒီ / ဒီဗီဒီပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။
စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသူက Screensaver service org.freedesktop.screenSaver, service org.freedesktop.PowerManagement ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီးအိပ်စက်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပေးပါတယ်။
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ခွဲထားသည်: libDraco, start-draco, draco-settings, draco-settings-x11, org.dracolinux.Desktop, org.dracolinux.Power, org.dracolinux.Powerd, org.dracolinux.Storage, org.dracolinux.XDG နှင့် xdg-open ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဤအပေါ်မှာ Desktop Environments (၂) ခုအသစ် ခေါ်ဘလော့ဂ်၌မှတ်ပုံတင်ထား «Lumina y Draco»အဓိကအားဖြင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အလင်းရောင်ရှိခြင်း၊ ဒုတိယသည်ပထမ၏ပထမအဆင့်အနေဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကို၏ဖြစ်ကြသည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ထို့အပြင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကမည်သည့်နေရာသို့မဆို ၀ င်ရောက်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် como OpenLibra y JedIT ဖတ်ရန် စာအုပ်များ (PDFs) ဒီခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အခြားသူများအပေါ် အသိပညာဒေသများ။ ယခုသင်ဤကြိုက်လျှင် «publicación», မဝေငှပါနဲ့ သင့်အတွက်အခြားသူများနှင့်အတူ အနှစ်သက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လိုင်းများ၊ အုပ်စုများ၊ လူမှုကွန်ယက်များ၏လွတ်လပ်စွာဖွင့်နိုင်သည် Mastodonလုံခြုံမှုနှင့်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်း ကွေးနနျးစာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Lumina နှင့် Draco: ၂ ရိုးရှင်းပြီးအလင်းရောင်ရှိသည့်အခြားရွေးချယ်စရာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
KDE Plasma 5.20 သည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးတက်အောင်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပေးထားသည်
ရှုံးနိမ့်နေသည့် Epic Games သည် iOS အသုံးပြုသူများကိုစွန့်လွှတ်သည်
သင်၏အီးမေးတွင်နောက်ဆုံးပေါ် Linux သတင်းကိုရယူပါ
သိကောင်းစရာများ repository ကို